VaMugabe Vanoda Hurumende yeMubatanidzwa muLibya
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanoti panofanirwa kuitwa hurukuro muLibya pakati penhengo dzeNational Transitional Council naVa Muammar Gadhafi.
VaMugabe vakataura mashoko aya vachibva kumusangano we United Nations General Assembly kuNew York. VaMugabe vanoti havacherichedzi NTC yemuLibya kudzamara yabvuma kuitaa hurukuro dzekuumba hurumende yemubatanidzwa naVaGadhafi
VaMugabe vakati dzimwe nyika dzemu Africa dzakamhanyira kutambira NTC sehutungamiri hutsva, uye vanoona nyika idzi sevatengesi.
African Union yakaburitsa gwaro svondo rapera ichiti yava kutambira nhengo deNTC sevatungamiriri vatsva veLibya. Asi mubatanidzwa wenyika dzemuAfrica wakatiwo uri kutarisira kushanda neNTC mukuvandudza nyika iyi kuitira kuti muitwe sarudzo dzakachena.
Mutauriri weZANU-PF, VaRugare Gumbo, vanoti ivo seZANU-PF vanowirirana nemashoko aVa Mugabe.
Asi mutauriri wemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, Va Luke Tamborinyoka, vaudza Violet Gonda we Studio7 kuti VaTsvangirai havawirirani naVaMugabe panyaya yeNTC. Vanotiwo hurumende yemubatanidzwa haisati yataura pamusoro penyaya iyi.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naVa Welshman Ncube, VaNhlanhla Dube, vanotiwo hurumende inofanirwa kutevedzera zvakaitwa neAfrican Union.